Snowmobiles ब्राउज "यामाहा Ventura"
आज Snowmobiles को निर्माण मा नेता पकड चार ब्रान्ड: पोलरिस, Bombardier, आर्कटिक बिरालो र यामाहा। जापानी निर्माता जो खरीदार यातायातका सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम चयन गर्न अनुमति दिन्छ फरक विशेषताहरु, संग उपकरण उत्पादन गर्छ।
हाम्रो लेख स्नोमोबाइल "यामाहा Ventura" र यसको भिन्न लोकप्रिय मोडेल बारेमा बताउँछ।
जापानी पर्यटक Snowmobiles यसको वर्ग मा सर्वश्रेष्ठ हुन्। उद्यम शृंखला तीन मोडेल हुन्छन्:
रुपैया उद्यम TF।
रुपैया उद्यम GT।
बहु उद्देश्य उद्यम।
स्नोमोबाइलमा बीच मोडेल शक्ति मोटर्स र मात्रा विनिर्देशों फरक। तिनीहरूले विभिन्न कार्यहरू लागि डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईंको स्नोमोबाइल कसरी चयन गर्न "यामाहा Ventura?" हामीलाई प्रत्येक मोडेल विचार गरौं।
लामो-लामो दूरी यात्रा प्रेमीहरूलाई लागि
मोडेल "यामाहा Ventura एफएफ" पर्यटन को लागि सबै भन्दा राम्रो को धेरै एक द्वारा पहिचान। यो 120 लिटर issuing को 1049 सेमी3मा एक मोटर संग सुसज्जित छ। एक। शक्ति। लामो यात्राको समयमा सान्त्वना लागि नरम पछिल्लो निलम्बन पूरा गर्दछ।
फ्लिप-अप रेल स्नोमोबाइल परिवर्तन मानकहरु सवार को वजन वितरण र वजन आधारमा एक विशेष प्रणाली।
बाटोमा सान्त्वनाका स्तर बिजुली स्टीयरिंग, गरम ह्यान्डलहरू र समायोज्य backrest बढ्छ। अन्य सुविधाहरू कुराहरू लागि समर्थन को प्रावधान, 381 मिमी को कमला चौडाइ, 34.6 लीटर ट्यांक, विशाल मामला, साथै एक डिजिटल साधन प्रदर्शन समावेश गर्नुहोस्।
गति प्रेम गर्नेहरूका लागि
Snowmobile "यामाहा Ventura GT" मात्र पर्यटन प्रेम गर्नेहरूका लागि आदर्श छ, तर पनि छोटो दूरीमा मा जात स्प्रिन्ट। समायोज्य अगाडि र पछाडिको ग्याँस शक GYTR एक चिल्लो सवारी प्रदान गर्नुहोस्।
973 सेमी3को एक आवाजमा पेट्रोल इन्जिन तरल ठंडा छ। उहाँले परिवहन एक गतिशील प्रवेग दिन सक्षम छ। यो मोडेल स्नोमोबाइल "यामाहा Ventura" उत्कृष्ट विभिन्न अवरोध हटाउन।
इन्धन 30 भन्दा बढी लिटर को हिउँ स्थानहरू मार्फत लामो यात्रा को लागि पर्याप्त छ। प्रभावकारी टाउको ओप्टिक्स तपाईं अन्धकारमा नेभिगेट गर्न अनुमति दिन्छ। धेरै मालिकले स्नोमोबाइल सञ्चालन सजिलो र सही भन्न।
को स्टेरिड़ एक एम्पलीफायर संग सुसज्जित छ, footrest विरोधी-पर्ची सतह र गरम स्टीयरिंग ह्यान्डल छ।
Multifunctional स्नोमोबाइल "यामाहा Ventura बहु Purpoz" सुविधाहरू पर्यटक र utilitarian परिवहन जोडती। हाल तत्संबंधी दुई भेद मा उपलब्ध छ। सुरुमा, कम्पनी पछि स्नोमोबाइलमा लाइन 700 सीसी इन्जिन संग "यामाहा Ventura" द्वारा पूरक 499 सेमी3को एक मोटर, संग एक snowmobile प्रस्ताव राखे।
यो मोडेल, को drifts overcomes टो वा आवश्यक भएमा एक ट्रेलर ढोना हिउँ र बरफ, र अन्य वाहनहरु मा सार्न। त्यहाँ उनले र नियमित बांध्नु।
परिवहन अर्को सुविधा - अर्थव्यवस्था। साथै, वातावरण मा हानिकारक पदार्थ को उत्सर्जन संभव हदसम्म कम छ।
कमला 405 मिमी को एक चौडाई छ। प्रो सुविधा झोलुङ्गे गहिरो हिउँ हटाउन मद्दत गर्छ। परिवहन को वजन सिर्फ शीर्ष मा ह्यान्डलिङ बनाउने, अपेक्षाकृत सानो छ।
आवश्यक छ भने, एक snowmobile "यामाहा Ventura" सजिलै "फिर्ता गति" मोड मा अनुवाद गर्न सकिन्छ। यो गर्न, बस टगल स्विच गर्नुहोस्।
यस यात्री सीट भाग एकदम सामान लागि ठाउँ वृद्धि गर्न, धेरै बस हटाउन सकिँदैन।
पक्ष प्यानल Fairing सजिलै तालिका निरीक्षण वा मरम्मत को लागि इन्जिन गर्न सजिलो पहुँचका लागि हटाइएका छन्। ventilated डिस्क संग ब्रेक को द्रुत चिल्लो deceleration लागि जिम्मेवार छ। Handlebar र यात्री Handrails विद्युत ताप multistage प्रणाली संग प्रदान गरिन्छ।
वास्तविक संसारमा "यामाहा Ventura"
Windscreen को आगमन प्रवाह देखि चालक र यात्री समेट्छ। शक्ति स्टीयरिंग निकै मात्र छैन हैंडलिंग सुविधा, तर पनि बाटो मा वाहन stabilizes। Snowmobiles "यामाहा Ventura" गति सक्षम गर्न 130 मी / घन्टा।
धेरै परीक्षण र मालिकहरूको परीक्षण वास्तविक समीक्षा अनुसार, जापानी Snowmobiles उद्यम शृंखला ( "साहसिक") हिउँ-ढाकिएको भू-भाग मा हिउँदमा छोटो र लामो यात्राको लागि उत्तम हो। तिनीहरूले, छिटो सहज, manoeuvrable छन्, उत्कृष्ट ह्यान्डलिङ र उच्च maneuverability छ। अर्डर हिउँ मरुभूमिमा को लामो-दूरी hauls विजयी मा सान्त्वना बढाउन, विश्वको सबै भन्दा राम्रो ब्रान्ड को एक उत्पादन, यो धेरै सुविधाजनक उपकरणहरू र उपकरण संग सुसज्जित छ।
दबाब टायर एटीवी के गर्नुपर्छ?
आफ्नो हातले एटीवी लागि ट्रेलर। एटीवी ट्रेलर घर
250 VTR (होन्डा): विनिर्देशों, समीक्षा, समीक्षा, फोटो
मोटरसाइकल Irbis z1 मा: विनिर्देशों र समीक्षा (फोटो)
एटीवी लागि तेल: विशेषताहरु र विकल्प को peculiarities
प्रार्थनाले साइप्रियनलाई मदत गर्छ
ठूलो रूसी tsar - पत्रुस 1 को शासनकालमा
यसमा आधारित 'नारिन' लेवन र योगर्सहरू - तपाईंको तालिकामा एक स्वस्थ उत्पादन